Nkebi nke 1: Ihe ndị mmadụ na-emekarị mgbe ha ịgbanwee si iPhone ka Google Nexus
iPhone-eji ihe iOS sistemụ arụmọrụ na Google Nexus-eji ihe Android sistem. Nke a nwere ike ime ka nsogbu mgbe ị na-agbalị nyefee data n'etiti ngwaọrụ abụọ. Nkịtị usoro eji maka ebufe data si iPhone ka Google Nexus bụ nkwado ndabere na mpaghara ịzọpụta data si iPhone na kọmputa. Mgbe ahụ, data ga-agafere on Google Nexus site ụzọ dị iche iche, dị ka ozugbo ma ọ bụ site na ngwa. Ọghọm ike adịkwa ụfọdụ data ma ọ bụ oyiri ọdịnaya nke gị data. Ọ bụrụ na ị nwere otutu data, eleghị anya ị dịghị echetara nke data i azọpụta site iPhone na nke data na ị echekwara na gị Google Nexus. Ihe kacha ụzọ na nke a, ya bụ iji Inweta merging ọrụ napụtara na ngwa, n'ihi na ihe atụ.
Part 2. Easy ngwọta: 1 Pịa nyefee data si iPhone ka Google Nexus
Wondershare MobileTrans Ọ na-eji maka transfering data site na ekwentị gaa na ekwentị ọzọ dị ka ozi, kọntaktị, oku na ndekọ, kalenda, photos, music, video na ngwa. Ọzọkwa ị pụrụ ndabere gị iPhone na chekwaa data na PC gị na ihe atụ, ma weghachi mgbe na ị chọrọ. Ihu ọma gị niile dị mkpa data nwere ike zigara ngwa ngwa si ​​a ekwentị gaa na ekwentị ọzọ. The Google Nexus ngwaọrụ-akwado site na Wondershare MobileTrans bụ Google Nexus 5, Google Nexus 4, Google Nexus 7, Google Nexus S, Google Nexus 10, Google Nexus S 4G, Google Nexus, Google Nexus One. Ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị nyefee data si iPhone, ị ga-amarakwa na iPhones-akwado site na Wondershare Mobile Trans bụ iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S.
Anyị na-ekwu ama banyere iOS sistem si iPhones na Android sistem si Google Nexus igwe ha dị iche iche na data apụghị na-akọrọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na otu ọzọ nke a abụọ dị iche iche ngwaọrụ. Nke a mere, kama na iji aka usoro, i nwere ike iji Wondershare MobileTrans nyefee data site na iPhone ka a Google Nexus ekwentị. Na Wondershare MobileTrans, ị nwere ike nyefee kọntaktị, foto, ozi, songs, videos si gị iPhone ka a Google Nexus ekwentị. Iji n'ihu, akpa ị ga-jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa. Mgbe ị na-eso nzọụkwụ si n'okpuru ị ga-enwe ike nyefee gị niile data site na otu ekwentị gaa na ekwentị ọzọ.
Iji jiri ụzọ a, ị mkpa a Computer, ihe iPhone, a Google Nexus ekwentị na Wondershare MobileTrans ngwá ọrụ.
1. Jikọọ gị iPhone na gị Google Nexus ekwentị na kọmputa
Gị iPhone na gị Google Nexus ekwentị na-napụtara na eriri USB. Were USB cables na jikọọ na gị ntị gị na kọmputa. Mepee Wondershare MobileTrans na pịa "Malite" ịbanye ekwentị na ekwentị transfer window. MobileTrans Ịchọpụta ngwa ngwa gị ma igwe ọ bụrụ na ha na-ekwesị ejikọrọ. Ị ga-ahụ a obere button iji tụgharịa n'etiti abụọ na ngwaọrụ na i nwere ike iji ya ma ọ bụrụ na-ahọrọ nyefee data si Google Nexus gị iPhone. Gị niile data dị ka kọntaktị, ozi ederede, kalenda, oku na ndekọ, ngwa, photos, music, videos na-depụtara na ị nwere ike họrọ data na ị chọrọ nyefee. Ọ bụrụ na ị chọọ, ị pụrụ hichaa data gị Google Nexus tupu na-amalite na-edegharị ọhụrụ data na ngwaọrụ gị.
2. Iji Malite idetuo button iji nyefee data gị iPhone gị Google Nexus ekwentị
Eleghị anya ị chọrọ nyefee gị niile data si iPhone ka Google Nexus. Ma, bụrụ na ị mkpa naanị ọtụtụ ihe, i nwere ike ịhọrọ data na ị chọrọ ka e bufee. Dị nnọọ ego ndị ihe. Mgbe nhọrọ e mewo ka, ị ga-inupụ Malite Copy bọtịnụ. Ị ga-enwe ike ịhụ data gị isi iyi iPhone na ike ga-zigara gị ebe Google Nexus ekwentị. Ọ dị ezigbo mkpa ka Akwụpụla gị iPhone na gị Google Nexus ekwentị. Ọ bụrụ na a na-eme na mberede, ị kwesịrị ị malite n'elu dum usoro.
Depụta niile ụdị nke Google Nexus.
Nexus 9, na-arụ ọrụ Android 5.0 Lollipop ọ bụ mbadamba na 8.9 sentimita asatọ ihuenyo.
Nexus 6, na Android Lollipop version 5.0 ọ bụ ekwentị na 6 sentimita asatọ Quad HD ngosi.
Nexus 5, ekwentị na-enwe oké 8 MP igwefoto eji maka HDR + kpọọ foto site ụbọchị na sharper photos n'abalị.
Ọzọ Google Nexus bụ: Nexus 4, Google Nexus 7, Google Nexus S, Google Nexus 10, Google Nexus S 4G, Google Nexus, Google Nexus One.
> Resource> iOS> otú nyefee Data si iOS Devices ka Google Nexus